Ahụmịhe ndị ahịa Flekosteel na-ekpughe Gel iji maka ọgwụgwọ mgbu azụ na nkwonkwo.
Ahụmahụ nke iji Flekosteel
Ahụmahụ nke iji gel site na Victor si Brno
Amaara m onwe m gbasara ọrịa nkwonkwo. Mgbe m dị afọ 40, amalitere m inwe ọrịa ogbu na nkwonkwo nke ikpere, ihe karịrị otu afọ apụghịkwa m idi nsogbu ahụ bilitere. Achọrọ m ịkọrọ ahụmịhe m na ịchọta ọgwụgwọ.
Ihe mgbu ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-esikwu ike, agakwurukwa m dọkịta maka enyemaka. A na-atụ aro m ọgwụ dị iche iche, ma Flekosteel gel nyere aka dozie ọnọdụ ahụ ma weghachi ọrụ nke usoro musculoskeletal.
Gịnị kpatara ya kpọmkwem?
Balm Flekosteel bụ otu n'ime ndị dọkịta m letara ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii gwara m. N'oge ahụ, agbalịrị m ọtụtụ ụzọ dị iche iche na ndị na-abaghị uru, n'ihi ya, ekpebiri m igwu egwu ya. Mbụ m lere anya na ịntanetị wee gụọ ihe niile m nwere ike ịhụ gbasara Flekosteel.
Flekosteel bụ gel maka nkwonkwo. Enyere ọgwụ ahụ maka:
ogbu na nkwonkwo.
Ọzọkwa, gel megide nkwonkwo na mgbu azụ nwere ike iji na-emeso mgbanwe mmebi na afọ nke na-eme na ọkpụkpụ azụ. Ozi enwetara nyere aka, mana ezughi oke. Ekpebiri m ileba anya na nyocha ndị ahụ ma ọ tụrụ m n'anya ịhụ na ọtụtụ n'ime okwu ndị ahụ dị mma.
Kedu ihe ha na-ekwu maka Flekosteel?
Ndị ọbịa na forums ọgwụ na obodo na-ahụ ọrụ dị irè nke gel nkwonkwo. Ọtụtụ ndị achọpụtala ọganihu na ọrụ nke musculoskeletal sistemu ugbua otu izu ka ejiri gel mgbe niile.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ude nwere ike inye iwu naanị na webụsaịtị onye nrụpụta. N'otu oge ahụ, ntuziaka maka ojiji nke ọgwụ na-ebipụta na portal, nke na-akọwa otú e si eji ihe mejupụtara.
Ọnụ ego gel dị ala n'ihi na onye nrụpụta anaghị ere ngwaahịa ahụ site na ndị na-ere ọgwụ. N'ihi ya, ekpebiri m ịnwale ude ọrụ ebube. Ihe si na ya pụta tụrụ m n'anya. Ngwọta ahụ n'ezie ọ bụghị nanị na-emeso mgbu. Mgbe otu ọnwa nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, achọpụtara m ọganihu na nkwonkwo nkwonkwo. Na, nke kachasị mma, mmetụta ahụ na-adịghị mma agaghị alaghachi azụ.
Gel rating: 5. Ngwaahịa bụ n'ezie kpokọtara. O nweghị contraindications na mmetụta dị n'akụkụ, yabụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enweghị mmeghachi ahụ nfụkasị siri ike na ihe mejupụtara ya nwere ike iji ude ahụ.